Ongororo pfupi yeKunogara Chinobvumirwa | Zvazvino Zvinyorwa
"Panogara chinokanganwa" ibasa ra Luis Cernuda Musoro waro unotorwa kubva mundima naBécquer uyezve iyo inopa zita rayo kurwiyo nemuimbi wechiSpanish-munyori wenziyo Joaquín Sabina. Kubvuma, zviripachena izvo zvinounza kurwadziwa kwekuguma kwerudo ndiyo axis yakatenderedza iyo iyo yakazara muunganidzwa wenhetembo inotenderera. Ndirwo rudzi rwekufa, kudzima ndangariro kunotungamira mudetembi kuti anzwe kushungurudzika nezvakange zvasara zveyaimbova manzwiro akanaka.
Ichi chikamu chisina kunaka che rudo, yemhedzisiro, yezvinosara kana zvamira kuvapo, uye neimwe nzira ndizvo zvinoziviswa chero kuva mudiwa, nekuti hapana chisingaperi uye kupera kwerudo danho kuchazopa nzira yekukanganwa iyo ichaunza manzwiro asina kunaka kupesana nehukama hweiyo nhanho yapfuura umo mufaro nekugara zvakanaka kwaive mbiru dzekutanga.
Kunge kupikiswa pakati perudo uye kusuwa kwemoyoPakati pekurangarira uye kukanganwa, pakati pemufaro nekushungurudzika, kumwe kuratidzwa kunoonekwa mubasa, iri iro riri pakati pengirozi nadhiyabhorosi, rinoita semanzwi enhetembo achizevezera kumuverengi.
Iri basa ndiro rinonyanya kuzivikanwa naLuis Cernuda, uyo, kunyangwe hazvo asina kuwana kutsoropodzwa kwakanaka mumakoketi ake ekutanga enhetembo, akawana kurumbidzwa kwese nekuburitswa kwebhuku ratiri kubata naro izvozvi.
1 Kunogara kukanganikwa, bhuku
2 Kuongorora kweKunogara kukanganwa
2.1 Chikamu 1 chenhetembo
2.2 Chikamu chechipiri cheKunogara kukanganwa
2.3 3 chikamu
3 Inorevei nhetembo yekuti Panogara kukanganwa
4 Kufananidzwa kwenhetembo
Kunogara kukanganikwa, bhuku
Bhuku raLuis Cernuda Iko kunogara kukanganwa kwakaburitswa muna 1934.
Muunganidzwa wenhetembo uyu ndewe nhanho yemunyori, paakarwadziwa nekuora mwoyo uye chikonzero nei achinyora nezverudo sekunge rwaive rwakaipa kana nemanzwiro anorwadza pachiri.
Pamusoro pezvo, zvinozivikanwa kuti zita rekuremekedza raakapa nhetembo, pamwe nekuunganidza kwake nhetembo, zvaive zvisiri izvo zvekugadzira, asi kuti akatarisa kune mumwe munyori, Gustavo Adolfo Bécquer, uyo ari muRima LXVI, mu ndima yayo yegumi neshanu, inoti "panogara chinokanganwa."
Iri bhuku rakaumbwa nhetembo dzinoverengeka, asi zvinenge zvese zvine mafungiro asina tariro uye asina tariro nezverudo nehupenyu. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mabasa ekutanga aLuis Cernuda akagamuchira kutsoropodzwa kwakawanda, akaramba achiedza uye achichinja, chimwe chinhu chaakazowana makore akazotevera.
Kuongorora kweKunogara kukanganwa
Mukati meunganidzwa wenhetembo, iro rine zita rimwe chete sebhuku rinozivikanwa kupfuura mamwe ese, uyezve iro rinodzikamisa madingindira ese anoita nemunyori mubasa iri. Naizvozvo, kuiverenga kunogona kupa pfungwa yenguva yaakange achipfuura uye chikonzero nei dzimwe nhetembo dzichiganhurana netariro, kusurukirwa, kusuwa, nezvimwe.
Kunogara kukanganikwa Ndima 22 dzakakamurwa kuita zvikamu zvitanhatu. Zvisinei, mita haina kunyatsofanana mundima dzese asi pane kusaenzana uye mamwe mavhesi akareba kupfuura mamwe.
Uye iwo masanzu haana kufanana munhamba yemavhesi. Yekutanga ine mavhesi mashanu nepo yechipiri iri 5; wechitatu wa3 ... achisiya wekupedzisira aine chete 4. Chaanoshandisa zvakanyatsonaka akasiyana manzwi ekutaura akadai se:
Munhu. Ipa hunhu hwevanhu, chiito kana chimwe chinhu kuchinhu kana zano.
Mufananidzo. Icho chimiro chekunyepedzera icho chinotsvaga kutsanangura chinhu chaicho mumazwi.
Anaphora. Izvo ndezve kudzokorora izwi, kana akati wandei, zvese pakutanga kwendima uye muchirevo.
Simile. Enzanisa mazwi maviri ane hunhu hwakajairika pakati pavo.
Antithesis. Icho chinoreva kufumura kupesana kwechimwe pfungwa icho chinowanzooneswawo munhetembo.
Chiratidzo. Iyo inoshandiswa kutsiva izwi rimwe kune rimwe.
Maumbirwo enhetembo aya anotevedzera marongero edenderedzwa kubvira paanotanga nepfungwa inorungwa kusvika yapera. Muchokwadi, iwe ukangotarisa nhetembo, uchaona kuti inotanga nechinhu chimwe chete icho chinopera, (panogara kukanganikwa), ichisimbisa zvikamu zvitatu zvakasiyana mukati mayo.
Chikamu 1 chenhetembo
Mariri, ndima 1 kusvika ku8, zvikamu zviviri zvekutanga, zvaigona kudzikiswa. Musoro wakafukidzwa mune izvi ndewe kufa kwerudo, kufa pamweya, asi nekuda kwekusuwa kwake murudo, munyori haachavimba nemanzwiro iwayo.
Chikamu chechipiri cheKunogara kukanganwa
Muchikamu chino ndima 9 kusvika 15 dzinogona kuverengerwa, kureva, zvikamu 3 ne4. Zvichida hazvina tariro muchikamu chino chedetembo sezvo chishuwo chacho chiri rega kutenda murudo, edza nepese paunogona kufunga nezve iko kunzwa uye kuputsa nezvose zvandanga ndafunga nezve rudo.
Chekupedzisira, chikamu chechitatu chedetembo, kubva pandima 16 kusvika 22 (stanzas 5 na6) chinotaura nezvekuda kubvisa kunzwa kwerudo, ndisingade kuzviwana zvakare uye kuti zvinongoramba zviri sechiyeuchidzo mundangariro, kubvisa iwo manzwiro ekuda kuve padyo nemunhu.
Inorevei nhetembo yekuti Panogara kukanganwa
Kunogara kukanganikwa yakave yaLuis Cernuda nzira yekuratidza kurwadziwa kwaainzwa nekuda kwekusuwa kwerudo kwaakange aona. Muchokwadi, kwaari zvaireva kusada kusadanana zvakare, kusatenda murudo zvakare, uye kuda kukanganwa zvese zvanga zvaitika.
Manzwiro ese aya akafuridzirwa nemunyori munhetembo iyi, kunyangwe bhuku racho riine zvimwe zvakawanda. Nekudaro, pamwe ndiyo imwe inoisa kukoshesa kukuru sezvo ichitaura nezvekuvapo kwerudo, asiwo nekutambudzika kunouya nekuzvibvumira kutakurwa nako. Nechikonzero ichi, kana zvinhu zvikasaenda sezvazvinofanirwa kunge zvakagadziriswa, chaanoda kutsakatika, kufa, nekuti kunyangwe iye mutumwa waanogona kunzi "Cupid" akarovera museve werudo, haana kuitwa zvakafanana mune mumwe munhu.
Nokudaro, munyori anoedza kupotera mukukanganwa kumisa pfungwa dzisina kunaka uye kurega kunzwa kurwadziwa uye kupererwa nekuda kwekurangarira iyo nguva dzawakararama.
Luis Cernuda akaberekwa muna 1902 muSeville. Akanga ari mumwe wevananyanduri vakanakisa veGeneration ye27, asi akatamburawo zvakanyanya, zvichiita kuti nhetembo yake ive ratidziro yemanzwiro aakasangana nawo muhupenyu hwake.
Chiitiko chekutanga chaaive nacho nemabhuku chaive kuburikidza neshamwari yake huru Pedro Salinas, paakanga achidzidzira zvemutemo paYunivhesiti yeSeville (1919). Panguva iyoyo, akatanga kusangana nevamwe vanyori mukuwedzera pakunyora bhuku rake rekutanga.
Muna 1928 akaenda kunoshanda kuToulouse. Achagara kwerinenge gore, nekuti muna 1929 anotanga kugara nekushanda muMadrid. Zvinozivikanwa kuti akashanda muchitoro chebhuku cheLeón Sánchez Cuesta kubvira 1930, kuwedzera pakukwesha mapendekete nevamwe vanyori vakaita saFederico García Lorca, kana Vicente Aleixandre. Yakanga iri mumisangano iyoyo nevanyori iyo Lorca akamuzivisa kuna Serafín Fernández Ferro muna 1931, mutambi wechidiki akaba moyo wanyanduri. Dambudziko nderekuti iye aingoda mari yake chete kubva kuCernuda, uye, asinganzwe kudzoreredzwa, yaive nguva yaakasimudzira nhetembo Iko kunokanganikwa kunogara (pamwe nedzimwe nhetembo idzo dziri chikamu cheunganidzwa wenhetembo zvakafanana zita). Panguva iyoyo aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe, kunyange hazvo nhetembo dzakakamisikidzwa mukati medanho rediki.
Muchokwadi, aifanirwa kumumaka zvakanyanya sezvo zvisingazivikanwe kuti aive nerumwe rudo kunze kweizvozvo, saka zvingangoita kuti akateedzera nezvaakanyora mudetembo reKwakanganikwa kunogara, kubva parudo uye kutarisa mamwe manzwiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » "Panogara chinokanganwa"
"Peter naCaptain" rimwe remabhuku akanakisa akambonyorwa
Arkady Renko akateedzana, mutikitivha weRussia waMartin Cruz Smith